October 2017 – အပြာစာအုပ်များ
October 31, 2017 kolusoe0Comments
မဧကရီ မှာ ယောင်္ကျား ရှိပေမဲ. သူ.ယောင်္ကျား ကိုဇော်ထွန်း က နယ်တွင် အလုပ်လုပ်နေတာမို.၂ လတခါ လောက်သာ တွေ.ရပြီး သူ ကတော. ရန်ကုန် မှာပင် စတိုးဆိုင်ဖွင်.ကာဆိုင်မှာပင် အသက်၁၅နှစ်ခန်. အိမ် ဖေါ်မလေး
အန်​တီဝင်းမာ တစ်​​ယောက်​​ယောက်ျားဆုံးသွားတာ၅နှစ်​​လောက်​ရှိပြီဖြစ်​​သော်​လဲ ကျန်​ခဲ့တဲ့သမီး​လေး သူများအငြိုအငြင်​ အနိုင်​ကျင့်​ခံရမည်​စိုးသဖြင့်​​နောက်​အိမ်​​ထောင်​မပြုခဲ့​ပေ။ အန်တီ​၀င်းမာ ပုံစံကိုခင်​ဗျားတို့မြင်​လာ​အောင်​​ပြောပြရရင်​ အသက်​က ၄၀ စွန်းစွန်း​လေးဗျ။အသားကခပ်​ဖြူဖြူ ဆံပင်​က အ​ကြေ​ကောက်​​ကောက်​ထားပီး ခါး​လောက်​ရှိတယ်​ ..(​နောက်​က​နေ ဆံပင်​ဆွဲလိုးရင်​ ကွက်​တိပဲ​ပေါ့ဗျာ) ။အရပ်​အ​မောင်းက ငါး​ပေခွဲ​လောက်​ရှိမယ်​ ..ဖင်​ကြီး​တွေကလဲ အယ်​​နေတာပဲ က​လေးတစ်​​ယောက်​အ​မေသာ​ပြောတာ
ကျွန်မ နံမည်..မစီစီ တရုပ်ကပြားမလေးပေါ့…ကျမ ပါပါ သေသွားပြီးနောက်ပိုင်း မေမေနဲ့ အတူတူ ဘဝ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရုံးကန်ခဲ့ရပါတယ်…ဘွဲ့လည်းရပြီးပြီ…ကွန်ပြူတာ ဒီပလိုမာ လည်းအောင်ပြီးပါပြီ…ကုမ္ပဏီတွေက လျှောက်လွှာ ခေါ်တိုင်း လျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ ပါဘူး…အခု ကုမ္ပဏီ မှာ
October 31, 2017 October 31, 2017 kolusoe0Comments
ကျမလိုမိန်းကလေးတယောက်မှာ အတူနေတဲ့ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆို ယုံမလားဟင်… ထူးခြားတဲ့ကျမဘဝက ဒီလိုစခဲ့ပါတယ် လူတိုင်းကိလေသာတဏှာနဲ့မကင်းပါဖူး..ကျမလဲလူတယောက်ပဲမို့အပြစ်ရှိတယ်လို့မခံစားရပါဖူး.. ကျမ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်မှာ ကိုကိုနဲ့စတွေ့ခဲ့တယ် ကိုကိုက ကျမထက်၆နှစ်ကြီးတယ်လေ.. ဒီအရွယ်ထိ ပိပိပြားပြားနေလာခဲ့တဲ့ကျမ ကိုကိုရဲ့စူးရဲတဲ့အကြည့်တွေမခံနိုင်ပါဖူး.. တိုတိုပြောရရင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ် Happy New yearနေ့လေးမှာပေါ့..ကျမကအဖြေပေးတာနဲ့ကိုက်ိုက ကျမက်ိုမျက်နှာအနှံ့အနမ်းတွေပေးလိုက်တာ
ဒိုင်း..သေနတ်သံကား ကားလမ်းမပေါ်တွင်ကျယ်လောင်စွာထွက်ပေါ်လာသည်ကားပေါ်ပါခရီးသည်များကားထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွား ကြရာဝယ်…ဒေါ်မေ၀င်းမောင်တစ်ယောက်လဲအပါအ ၀င်ဖြစ်တော့သည်…..အားလုံးမသေချင်ရင်..ကိုယ့်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထုတ်ပြီး…အေးအေးဆေးဆေးဟိုမှာဖြန့်ထားတဲ့ အ၀တ်စထဲကိုထည့်ကြ..ရှာလို့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ အသက်ဖက်နဲ့ထုပ်ဖို့ပြင်ထား….မျက်နှာဖုံးစွပ်များနှင့်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူသောတစ်ယောက်က..အေးစက်စက်လှမ်းပြောလိုက်၏…ဒေါ်မေ၀င်းမောင်လည်း သူမလက်စွက်..လက်ကောက်နှင့်နားကပ်များကို ဓါးပြများခိုင်းသည့်အတိုင်းဆွဲချွတ်ပြီးအ၀တ်စပေါ်ပုံပေးလိုက်သည်….နေဦး..ဓါးပြခေါင်းဆောင်က သူမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သဖြင့်…သူမကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်ရပ်နေလိုက်သည်…။ ခင်ဗျားမျက်နှာမော့စမ်း….ဓါးမြဗိုလ်အသံကိုသူမကြားဖူးသလိုလိုတော့ရှိသည်..ဘယ်မှာကြားဖူးမှန်းမသိ..သြော်..စားရကံကြုံလို့မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲတာပါလား…ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကတော် ဒေါ်မေ၀င်းမောင်ပါလား..ဟေ့ကားသမားသွားလို့ရပြီ..ဒီမိန်းမကိုထားခဲ့..ဟားဟားဓါးမြဗိုလ်ကားသဘောကျစွာရယ်မောနေပြီ…ဒေါ်မေ၀င်းမောင်ကားငိုရုံကလွှဲပြီးဘာတတ်နိုင်ဦးမှာလဲ..ဓါးပြများကား သူမလက်ကိုကြိုးဖြင့်တုပ်ပြီး တောထဲသို့ဆွဲခေါ်သွားလေတော့သည်….တဖြည်းဖြည်းနှင့်ခြေဖ၀ါးများကလည်းပေါက်လာပြီ…မြို့မှာ အငြိမ်းစားနေခဲ့သော ဒေါ်မေ၀င်းမောင်တစ်ယောက် ယခုမှဒုက္ခလှလှတွေ့ချေပြီ။။ ဓါးပြများကြည့်ရသည်မှာလည်းသူမကိုသနားမည့်ပုံမည်သူမှမပေါ်။။စခန်းရောက်သောအခါဓါးပြများကားအနားယူချေပြီ…သို့သော်ဒေါ်မေ၀င်းမောင်ဘ၀ကမူ ဓါးပြဗိုလ်အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ လက်နှစ်ဖက်ကို
[18+] My P.S Partner (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
October 30, 2017 October 30, 2017 kolusoe0Comments
My Phone Sex Partner ဆိုတဲ့ ဒီကိုရီးယားဇာတ်ကားက IMDb(6.9) ထိ Rating ရရှိထားတဲ့ Romantic Comedy ဇာတ်ကားလေးပါ။ Phone Sex အပြောအဆိုတချို့နဲ့ အဖော်အချွတ်ဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့ကြောင့်သာ မိသားစုနဲ့ မကြည့်သင့်လို့ 18+
October 30, 2017 kolusoe0Comments
ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား 18+ Erotic ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ IMFB Rating က 7.2 လောက်ရထားသလို ကြည့်ရှုဖို့အတန်ဆုံးလို့ ပြောရမှာပါ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ၁၉၅၀နဲ့ ၁၉၇၀အတွင်းနာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများရဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့ဆိုရမှာပါဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အကျဉ်းကိုပြောရရင် Matthew
မိုးအုံ့နေသည်။ ဒီသင်္ကြန်တော့ အဖော်မရှိလို့ အပြင်လည်း မထွက်ချင်၊ မထွက်ဘူး ဆိုကာမှ သူတို့တိုက်တွေ နားမှာ တိတ်ဆိပ်နေရအောင် အကုန် လမ်းမကြီးတွေဆီ ရောက်ကုန်ပုံရသည်။ ဆူသံညံသံကအဝေးမှသာ ကြားရတော့သည်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း နိုင်ငံခြား အကုန်ရောက်၊လက်ကျန် တစ်ကောင်တလေကလည်း
ကွန်ယက် အပိုင်း (၉)(ဇာတ်​သိမ်း)
ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့။နေ့လည် ၁၂နာရီတိတိ။မေရီလင်းပြည်နယ် ဟိုင်းရက်စ်ဗီးလ် မြို့နယ်နွမ်းစုတ် ညစ်ပတ်သော ပီကင်း ကဖေး အမည်နဲ့ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်လေး ။နှင်းမိုးတွေ တဖြောက်ဖြောက် ရွာနေသည် ။မှန်ပြူတင်းကနေ အပြင်ဖက်က လူတွေ ထီးဆောင်းပြီး လမ်းဖြတ်နေတာကို သူငေးကြည့်နေမိသည် ။ခြေသံကြာ.းသည်
ကွန်ယက် အပိုင်း (၈)
သူနေနေတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ ၂၃လမ်းက သိပ် မဝေးလှတာကြောင့် လမ်းလျောက်ဘဲ သွားလိုက်သည်။ဒီနေ့ ရုံးဖွင့်ရက် ကျောင်းဖွင့်ရက် မှာ နွေးနွေး အလုပ်မသွားဘူးလား မသိဘူး ။ နွေးနွေးသည် ရူဘီက မျက်လုံးကို အ၀တ်နဲ့ လာစည်းပြီးနောက် အခန်းထဲက